Axmed Madoobe:-Hala bad-baadiyo dalkaan qaabka ay wax ku
Hogaamiyaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo maanta lagu soo dhaweeyay xarunta KMG ah ee maamulkiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Faderaalka Soomaaliya in ay dhammaan ka baxday heshiisyadda lagu gaaray Muqdisho ee doorashooyinka dadban ee dalka.
Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamo iyo jamhad ay ka sameysay gobolka Gedo oo ka mid ah maamulka Jubbaland, islamarkaana uusan guddi soo magacaabi Karin, maadaama dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ahaa in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo sida uu hadalka u dhigay.
“Yaa ka taliya gobolka Gedo” ayuu iswaydiiyay madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in maamul sharci daro ah dowladdu ka dhistay gobolka Gedo ee Koofurta Soomaaliya.
“Yay tahay Jubbaland-ta aanaan anaku maamulin” ayuu yiri isaga oo sheegay in maamulka ay dowladdu ka dhistay gobolka Gedo ay isku haystaan maamul shirci ah oo sheeganaya Dowlad-goboleedka Jubbaland.
“Dadka maamulka haaye ee hogaamiyayaasha faderaalka ah waa in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay in doorashadaasi dhacdo state(maamul)walba laba meelood ku qabto, waxaan diyaar u nahay in aanu qabo oo laba meel ku qabano laakiin waa goorma? Waa marka ay gacanteena ku soo noqota ee gudoomiyaha gobolku uu tago,ee ku xigeenkiisu uu tago, ee maamuladii degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo kuxigeenadiisa ay tagaan, wasiiradda iyo xildhibaanadu intay tagaan ay wax ku samayn karaan” ayuu yiri
“Doorasho Kuma dhaceyso sida ay Maanta tahay Iyo Nuuca afduubka ee Xaalku Yahay ” ayuu yiri Axmed Madoobe, isaga oo intaasi raaciyay “doorashada aan qabanayo waa in ay tahay mid lagu heshiiyay….. waa sax doorasho waa in ay ku dhacdaa waqtigii lagu heshiiyay”.
“Aan dirno guddi ee xagaan u dirna” ayuu iswaydiiyay hogaamiyaha Jubbaland oo dowladda Faderaalka Soomaaliya ugu baaqay in lafuliyo qodobadii doorashada ee ay ku heshiiyeen madaxwyne-yaasha Dowlad-goboleedyada iyo hogaamiyayaasha Dowladda Faderaalka Soomaaliya.
“Dadka maanta masuuliyadu wadanku saarantahay ee Hogaamiyaha iyo hoogaanka dowladda dhexe ee Faderaalka waxaa looga baahanyahay in ay kala saaraan habraaca doorashada,nuuca doorashada iyo siday u dhacay iyo Kaanbayn-kooda siyaasadeed, waa in ay kala labo noqdaan, madoonayno doorasho u dhacaysa harqaanbaan tagayaa dharkaan kalaan tolanaa sidaas hala iidoorto NO(Maya) ma dhacayso taasi, waa in doorashadu ahaa mid loo simanyahay sida maalin dhaweeto masharixiintu ku baaqayeen…….waa in la isqanciyo” ayuu yiri Axmed Madoobe.
“Waxaan ku baaqayaa oo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada dowlad-goboleedyada kuligood ugu baaqayaa in la badbaadiyo dalkaan…. markastoo oo waqtigu sii jiitamo dhib ayuu gala” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Hogaamiyayaasha dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Dowlad-goboleedyada dalka ayaa ku heshiiyay qaabka doorashada iyo jadwalka doorashada, hayeeshee mucaaradka iyo dowlad-goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa dhaliilsan qaabka ay Dowladda Faderaalka u wado doorashooyinka dalka.
Labadii Xiddig Ee Liverpool Ee Imtixaanka Ku Dhacay,